ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ကနေဒါပါလီမန် ပြန်လည်ရ? - Yangon Media Group
အော့တဝါ၊ စက်တင်ဘာ ၂၈
ကနေဒါပါလီမန်သည် မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ရခိုင်ပြည်နယ် ဘင်္ဂါလီအရေးအခင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် နိုင်ငံသားအဖြစ် ပေးအပ်ထားခြင်းမှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်က ကန့်ကွက်သူမရှိ ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ကြသည်ဟု ကနေဒါ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရုံးပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ အက်ဒမ်အော်စတင်က စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
ကနေဒါအစိုးရသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်က ပေးအပ်ချီးမြှင့်ထားသော ဂုဏ်ထူးဆောင်နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားမှုအား ကမ္ဘာ့အခြားသောအနောက်နိုင်ငံများနည်းတူ ယင်းသဘောအမြင်မကြည်လင်လျှင် ပေးအပ်ချီးမြှင့်ထားခဲ့သော ဆုတံဆိပ်များအား ပြန်လည်ရုပ် သိမ်းသည့်နည်းတူ ယခုလည်းယင်းသို့ကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များက ဘင်္ဂါလီများအား လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုမရှိပါဟု ငြင်းဆိုထား သော်လည်းလက်မခံဘဲ”လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု”ပြုသည်ဟူ၍သာ ကြေညာခဲ့သည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်ကမူ ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများကိုသာတိုက်ခိုက်ခြင်းဟု ကြေညာခဲ့သည်။
ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်များသည် အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ယမန်နှစ်ကထွက်ပြေးကာ ဒုက္ခသည်များအဖြစ် ခိုလှုံနေထိုင်ခဲ့ကြရပြီး ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်များသည် တရားဥပဒေမဲ့သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအကြမ်းဖက်ခံရ ခြင်းနှင့် ကျေးရွာများအား မီးရှို့ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု အက်ဒမ်အော်စတင်က စွပ်စွဲပြောဆိုလိုက်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်လက်ရှိတွင် မြန်မာ့တပ်မတော် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် အာဏာချိန် ခွင်လျှာမျှယူကာ အုပ်ချုပ်နေသည်ဟူ၍ အက်ဒမ်အော်စတင်က ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်သည်။ ယင်းကြောင့် ”ကနေဒါနိုင်ငံသားအဖြစ် အထူးခံစားခွင့်များ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဆက်လက်ပေးအပ်တော့မည်မဟုတ် ကြောင်း” ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အက်ဒမ်အော်စတင်ကပြောဆို ခဲ့သည်။
ဆဲလ်​တာ​ဗီဂိုနဲ့ သ​ရေကျခဲ့ပြီး​နောက်​ ​နောက်​ထပ်​ စံချိန်​တစ်​ခု ထပ်​မံတင်​နိုင်​ခဲ့တဲ့ ?
တိုက်ပွဲရှောင်များ ခိုလှုံရာနေရာသို့ အလှူရှင်များက အရေးပေါ် စားသောက်ကုန်များ သွားရောက် လှူဒ